Maitiro ekutumira mavhidhiyo kuburikidza neWhatsApp muGIF fomati | IPhone nhau
Mumakore achangopfuura, takaona mafaera eGIF fomati ave chishandiso chakashandiswa zvakanyanya kana zvasvika pakugovana manzwiro edu, tichisiya madimikira emhando yepamusoro asina kuperekedzwa. kubva pakutanga kwenguva.
WhatsApp inotevera yako yakajairika parsimony painounza maficha nyowani ayo atovepo pane mamwe mapuratifomu, akadai seTeregiramu, zvakatora nguva yakareba kupa rutsigiro rwemhando idzi dzefaira. Parizvino, haitibvumidze chete kutsvaga maGIF ekutumira, asi zvakare inotibvumidza kuti tikurumidze kushandura mavhidhiyo kuva maGIF.
MuApp Store tinokwanisa kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza isu chinja vhidhiyo kuGIF faira, asi kana chinangwa chekushandurwa kuri kuigovana kuburikidza neWhatsApp, isu hatidi kuomesa hupenyu hwedu, nekuti iko kutumira mameseji kunotibvumidza kuti tizviite nekukurumidza uye pasina kana dambudziko.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuenda kune hurukuro yatiri kuda kugovera iyo vhidhiyo faira mune yeGIF fomati.
Tevere, tinoenda kuraibhurari uko iyo vhidhiyo yatinoda kushandura iri.
Panguva iyoyo, iyo WhatsApp vhidhiyo mupepeti ichaisa, mupepeti uyo unotibvumidza kucheka vhidhiyo nekusarudza chete chikamu chatinoda kugovana.
Kumusoro kurudyi, sarudzo mbiri dzinoratidzwa: Kamera icon (inomiririra fomati yevhidhiyo) / GIF.
Kuti tishandure chikamu chevhidhiyo icho chatinoda kutumira mumhando yeGIF, tinofanirwa kubaya paGIF uye tinya bhatani rekutumira. Asi kutanga, kana tichida, tinogona kuwedzera chinyorwa chinoperekedza GIF.
Zvichienderana nekuti vhidhiyo yacho inotora nguva yakareba sei, iko kushandurwa kunoitika kanenge pakarepo uye kunozogoverwa chaiko mune chat chatiri. Kana asiri iwo mhedzisiro yakakodzera, yeuka kuti kwenguva yakati rebei, WhatsApp inotibvumira kudzima mameseji atakaburitsa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekutumira mavhidhiyo kuburikidza neWhatsApp muGIF fomati
jose mutumwa tejera risco akadaro
Zvakanaka, ini handiwani iyo
kamera / gif mifananidzo
Pindura kuna josi mutumwa tejera risco
Ultrasonic tekinoroji inogona kuvandudza Apple Penzura
Apple inosunungura zviri pamutemo iOS 12.0.1 kune vese vashandisi